ဘာကြောင့်များ ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေစကားကို နားမဝင်သလဲ?
ဘာကြောင့်များ ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေစကားကို နားမဝင်သလဲ? ၁။ မိန်းမတွေက စကားများလွန်းတယ် သိပ်ကို အခြေခံကျတဲ့ အချက်က မိန်းမရဲ့ စကားများလွန်းတဲ့ အခြေခံဗီဇပါပဲ။ “ကျောပူတာပဲ ခံနိုင်မယ်။ နားပူတာတော့ မခံနိုင်ဖူး” ဆိုတဲ့ ယောက်ျားတို့ရဲ့ ဝသီအတိုင်း သိပ်ကိုများလွန်းတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ စကားလုံးတွေဟာ ယောက်ျားတွေကို နားလျှံသွားစေတာ မဆန်းပါဘူး။ ၂။ ယောက်ျားတွေက သိပြီးသားလို့ ယူဆတယ် မိန်းမဘက်က အချစ်ရေးအကြောင်း ပြောမလား? အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ပြောမလား? နားလည်မှု? ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့ သစ္စာတရား? ယောက်ျားအားလုံးနီးပါးက ဒါတွေ သူတို့နားလည်ပြီးသားလို့ ယူဆကြပါတယ်။ သင်ပြောလည်း အပိုလို့ယူဆနေတတ်ပါတယ်။ ၃။ မိန်းမတို့ရဲ့ ဗြစ်တောက်ဗြစ်တောက် မိန်းမတွေဟာ အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကို တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ …
ယောက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့ မိန်ကလေးတစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး အဲ့ဒီ ယောက်ျားကို ချစ်နေသေးတဲ့စိတ်ကြောင့်သာ ဘဝ ပျက်စီးသွားမှာပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အယုံကြည်လွယ်တယ်. ခံစားရလွယ်တယ် အားနာလွယ်တယ်.. အစွဲလမ်းကြီးတတ်တယ် ဆိုရင် နောင်တတွေနဲ့ အလိမ်အညာတွေပဲ ခဏခဏ ခံနေရမှာပေါ့ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ်ပြီး ရှေ့ဆက် လက်မတွဲပါနဲ့. အနေနီးမှုကို မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ ဖောက်ပြန်တာဟာ အချစ်ကို ကိုးကွယ်တာ မဟုတ်ဘူး ယောက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့ မိန်ကလေးတစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး မွေးရာပါ ဆင်ခြင်တုံတရား အားနည်းတာ. စာရိတ္တသက်လုံ မကောင်းခဲ့တာပါ ပြောချင်တာက. ဆန္ဒနဲ့ သိက္ခာကို ရွေးချယ်ရတဲ့အခါ သိက္ခာကိုသာ ဦးစားပေးပါ လိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တာကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ လိုအပ်တာကိုသာ ဦးစားပေးပါ …
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီ မထင်ပါနဲ့…. စကားတစ်ခွန်းက လက်ဆောင် တစ်ခုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ် zawgyi and unicode နှစ်မျိုးဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ မိန်းမ ရော့ မင်း ကြိုက်တာ ဝယ်၊ ကြိုက်တာ သုံးဆိုတဲ့ စကားထက်…. မိန်းမ အပြင် အတူသွားကြမယ်လေ ပြင်ဆင်လိုက်၊ ဘာလိုချင်လည်း လိုက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့၊ စကားအသုံးပြုမှုလေးက ပိုနွေးထွေး ကျေနပ်စေရတာပါ။ မိန်းမ စားနှင့်ကွာ ဝမ်းမှ မဆုံတာဆိုတဲ့၊… စကားထက်….. မိန်းမ ခဏတော့ စောင့်ပေးနော်၊ ဗိုက်ဆာပေမယ့် အလုပ်မပီးသေးလို့ပါဆိုတဲ့၊ စကား အသွားအလာလေးက ပိုပြီး စိတ်ကျေနပ်စေရတာပါ။ မိန်းမ အိမ်အသုံးစရိတ်က ကုန်လှချည်လားဆိုတဲ့ စကားထက်……. မိန်းမ ကုန်ဈေးနှုန်းအခြေအနေ …
“ရောဂါပေါင်း မြောက်များစွာကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ ရဲယိုသီးရဲ့ အံ့မခန်းအစွမ်းနဲ့ အသုံးပြုပုံများ”
“ရောဂါပေါင်း မြောက်များစွာကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ ရဲယိုသီးရဲ့ အံ့မခန်းအစွမ်းနဲ့ အသုံးပြုပုံများ” ရဲယိုသီးကတော့ အသက်ကြီးတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေ အမြဲစားသုံးလေ့ရှိတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ရဲယိုပင်က ရှားပါးတဲ့ အပင်မျိုး မဟုတ်ပဲ နေရာဒေသတိုင်းမှာ ပေါက်ရောက်နိုင်လို့ အပင်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် အိမ်တိုင်း စိုက်ပျိုးထားသင့်တဲ့ နတ်ဆေးပင်ပမာ အစွမ်းထက်တဲ့ အပင်တစ်ပင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲယိုသီးက ဒီတိုင်းစားရင်တောင် အစွမ်းထက်တဲ့ အသီးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အပြင် ရောဂါပေါင်း (၁၀၁) မျိုးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ရှိပါတယ်။ ရဲယိုသီးကို စားသုံးမယ်ဆိုရင် ဗိုက်ထဲမှာ အစာမရှိတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ပိုပြီး စားပေးသင့်ပါတယ်။ ရဲယိုသီးရဲ့ အနံက ထူခြားတာကြောင့် ဒီတိုင်း စားရမှာ တစ်မျိုးဖြစ်နေရင် ပျားရည်၊ ထန်းလျက်တို့နဲ့ ရောပြီး …
အတ္တမာန ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို အဆုံးသတ် သွားစေနိုင်ပါတယ်..
အတ္တမာန ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို အဆုံးသတ် သွားစေနိုင်ပါတယ်.. တစ်ခါက ကျွန်း လေး တစ် ကျွန်း ပေါ်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ၊ အမုန်းတရား ၊ လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မောဟ ၊ သောက ၊ အတ္တမာန ၊ ဝမ်းနည်းမှု ၊ ပျော်ရွှင်မှု ၊ စိုးရိမ်မှု စတဲ့ စိတ် ခံစားချက် ပေါင်း များစွာ ဟာ အတူတကွ နေထိုင် ကြ ပါ တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ နေထိုင်လာရင်း တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့ နေထိုင်တဲ့ ကျွန်းလေးဟာ လေမုန်တိုင်း တစ်ခု …
သင် (သို့) သင့်ချစ်သူ နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင် …
သင် (သို့) သင့်ချစ်သူ နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင် … နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်… ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ :-p သူများကို ကူညီလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ သုညဖြစ်သွား ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူတွေပါ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်း အရမ်းကောင်းသလို သံယောဇဉ်လည်း အလွန်ကြီးကြတဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်လည်း …
ကုန်းဘောင်ခေတ်က အထက်မြက်ဆုံး မိဖုရားကြီး (သို့) စကြာဒေဝီ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကုန်းဘောင်ခေတ်က အထက်မြက်ဆုံး မိဖုရားကြီး (သို့) စကြာဒေဝီ အကြောင်း သိကောင်းစရာ ကုန်းဘောင်ခေတ် မိဖုရားများဟု ဆိုလိုက်လျှင် အလွန်ကျော်ကြားလှသည့် နန်းမတော်မယ်နု ၊ ဆင်ဖြူမရှင် နှင့်စုဖုရားလတ် တို့ကို သာ ပြေးမြင် မိကြပေ လိမ့်မည် ။ သူတို့ကျော်သည် ဆိုရာ မှာ မာနကြီးသည့် ဘက် ၊ မကောင်းသည့်ဘက် တို့တွင် ကျော်ကြားခြင်း ဖြစ် သည် ။ သမိုင်းတွင် သူတို့အား မိဖုရားဆိုးများအဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည် ။ သူတို့နှင့် ဆန့်ကျင်စွာ တိုင်းပြည်မင်းအား ဦးဆောင်လမ်းပြကာ အကျိုးပြုသွားခဲ့သည့် အလွန် ထူးချွန်ထက်မြက် သော မိဖုရားကြီး တစ်ပါးလည်း ရှိခဲ့သည် …